I-Golfer Al Geiberger: I-Bio ye-First-59-Shooter
I-Biography ye-golfer yokuqala ukudubula 59 kwi-PGA Tour
U-Al Geiberger waphumelela kwamaxesha angaphezu kwe-10 kwi-PGA Tour, kubandakanywa nobunzima obukhulu. Kodwa uya kukhunjulwa ngonaphakade njengomdlali wokuqala wokutyelela ukuphuka 60.
Umhla wokuzalwa: Septemba 1, 1937
Indawo yokuzalwa: i- Red Bluff, i-Calif.
Isiteketiso: " Mnu 59 ," ngenxa yezizathu ezicacileyo. Okanye uza kuba ngomzuzwana. Ngaphambili ekuqaleni kwakhe, uGeiberger wambi wambiwa ngokuthi "I-Peanut Butter Kid" okanye "i-Skippy" ngenxa yepake yakhe yokulayisha ibhogi yakhe yegalufu ngeesanti zebhanti ze-peanut kunye nokuzithoba kuwo onke amanqaku akhe.
I-PGA Tour: 11
(Iimpumelelo zikaGeberger zidweliswe emva kwe-bio engezantsi.)
1966 IPGA Championship
Amabhaso kunye neMbeko kwi-Al Geiberger
Ilungu, iqela le-US Ryder Cup, ngo-1967, 1975
U-Al Geiberger kwiintsana zakhe etshela umfazi malunga nomjikelezo wakhe we-59: "Xa sabuyela ehotele baqhubela ekamelweni ukuba baxelele umfazi ukuba ndibeneminyaka engama-59. Wathi, 'yintoni na?'"
U-Lee Trevino , emva kwe-59 yeGeberger: "U-Al Geiberger kufuneka afune ukuvavanya ukuba uyilungu loluntu."
Curtis Strange kwi-59 ye-Geiberger: "Le khosi yayiyizifundo ezi-3, 4, ezi-5, ndiza kuba ndibethe ukuba awuyi kubona i-59 engaphezulu. Ndicinga ukuba enye yeyona nto ibaluleke kakhulu kwimbali yomdlalo. ukwenza. "
U-Al Geiberger wayeyi-golfer yokuqala yokudubula 59 kwi-PGA Tour tournament round.
Ngokutsho kwe-pgatour.com, iGeerger ngumdlali kuphela wokuphumelela umqhubi wePGA Tour (ngaphandle kwee-majors) ngaphandle kokudubula i-rounds kuma-60s. UGeiberger wadubula i-72, 59, 72 no-70 ekuphumeleleni ngo-1977 uDanny Thomas Memphis Classic.
UGeiberger ugibele ibhogi yakhe yegalufu ngeesandwisi zebhokisi ze-bhotela ukuze ancede ukugcina umgudu wakhe. Emva kokuwina i- PGA Championship ye -1966-apho azinqamle khona ezo ntswichintshi kulo lonke - wahamba kwindlela yokubonisa umxhasi oxhaswe ngu ... inkampani yebhotela ye-peanut.
Biography ye-Al Geiberger
Uphumelele amaxesha angama-11 kwi- PGA Tour , kubandakanye inxaxheba kubuncoma bobukhulu, kunye namaxesha angaphezulu kwe-10 kwiiMidlalo zoTyelelo.
Kodwa u-Al Geiberger uya kukhunjulwa ngonaphakade njengomntu wokuqala ukudubula 59 kwi-PGA Tour.
Umhla waba ngu-Juni 10, 1977, kwaye umqhudelwano nguDanny Thomas Memphis Classic . Kwakuyijikelezo lesibini kwiColonial Country Club eMemphis, eTenn., NaseGeiberger badubula 30-29--59, benza i-10-foot foot birdie bebeka kwi-hole yokugqibela ukuze baqede umda wembali. Wayenemibhobho emithandathu, i-11 birdies kunye nolunye ukhozi , kwinqanaba elithile elibekwe u-8-ngaphantsi kwexesha eli-7. Kusengomnye wecandelo elincinane elingama-59 edutshulwa kwi-PGA Tour.
Umjikelezo wawungenakwenzeka: Inkqubo yegalufu yayineenkomo, imifuno; kwakuyi-degrees ezili-100 ngaloo mini; kwaye uGegerger wayengeke engqongqo phantsi izikhonkwane kunye nendlela yakhe yokukhwela. Kodwa i-putter yakhe yayisemlilweni: I-birdie yayo emfutshane kakhulu yosuku yayingama-8.
Ukususela ngaloo mini, uGeiberger ubizwa ngokuba ngu "Mnu 59."
UGeiberger wakhula eCalifornia kwaye umqhubi wakhe wokuqala wokuqhubela umdlalo ngowona-1954 iNational Jaycee Championship. Emva kokugqitywa kwiYunivesithi yase-Southern California, uGeiberger waphenduka ngo-1959 waza wajoyina iPGA Tour ngo-1960.
Ukuphumelela kwakhe kokuqala kokuKhenketwa kwaba ngu-1962 i-Ontario Open Open Invitational. UGeiberger wayengumdlali oqhubekayo phakathi kwee-1960s, nangona kungengowenkwenkwezi, kwaye wada wawuthabisa i-PGA Championship ye-1966.
Umsebenzi wakhe wawubonakala ulungele ukususa, kodwa iingxaki zesisu neengxakumbo zamncinci. Enyanisweni, emva kokuphumelela kwePGA Championship akazange aphumelele kwakhona iminyaka eyisibhozo.
Emva koko, kwiminyaka yee-1970, uGeiberger wayenandipha amaxesha akhe amahle kakhulu, ephumelela kabini ngonyaka ka-1975-76 aze arekhode irekhodi lakhe ngeenxa zonke ngo-1977. Ulokugqibela lwakhe lwePGA Tour kwaba ngu-1979 uColonial .
Iingxaki zonyango zabuya, nangona kunjalo, kwaye uphando oluphuthumayo ngo-1980 lwasusa i-colon yaseGeiberger. Nangona le nkqubo enkulu, uGeiberger waqhubeka ukuphumelela amaxesha ama-10 kwi-Tour Tour, ngo-1996.
I-Geiberger yaphawulwa ngefomati epholileyo, yesigxina eyakhokelela abaninzi ukuba bafune ukukopisha i-tempo yakhe. Wenza amavidiyo amaninzi okufundisa, kuquka iGolf kunye no-Al Geiberger , (ekugqibeleni wabizwa ngokuba yi- Sybervision's Muscle Memory Programming ne-Al Geiberger ) engenayo ingxelo - ngokuphindaphindiweyo imifanekiso ye-Geiberger's silky, ukuphindaphinda ngokuphindaphindiweyo (nantoni ye-YouTube).
Kwakhona wasebenza kwincwadi yokufundisa e- Swing for Lifetime kwaye wabhala incwadi yokufundisa i- Tempo .
UGeiberger unabantwana abathandathu. Omnye, uBrent, ungumqhubi wexesha eli-2 kwi-PGA Tour; Omnye, uJohn, ngumqeqeshi welizwe lokunqoba igalofu yegolfu.
Uluhlu lweeNkundleni zoThutho lweGeberger
1962 I-Ontario Vuleka ukuvakasha
Ngo-1963 u-Almaden Uvulekile
1965 i-American Golf Classic
1974 iSahara Invitational
Ngo-1975 INYONYAKA YAMANZI YAMASEBENZI
Ngowe-1975 I-Tournament Players Championship
1976 iGreenboro Open Open
1976 iWest Open
Ngowe-1977 uDanny Thomas Memphis Classic
1979 Isimemo seSizwe samaKoloni
1987 iVantage Championship
Ngowe-1987 abaPhezulu beSizwe soKhuselo lweGalati
1988 I-Pointe / Del E. Webb Arizona Classic
1991 iKroger Senior Classic
Ngo-1992 Infiniti Senior Tournament of Champions
Ngo-1993 Infiniti Senior Tournament of Champions
1996 I-Greater Naples Challenge IntelliNet
Abaxhasi: I-Bird-efana ne-Dinosaurs ye-Mesozoic Era
Bala ipesenteji yeeMilinganiselo ezithile kwi-Excel
I-Las 10 i-profesiones i-pagadas e-Estados Unidos ngo-2017